Indlu yowesifazane inye into efanayo nokusebenza eofisini yomntu. Kungekudala okanye kamva kufika ixesha xa ufuna ukuphumla okanye ngamanye amagama-shiya.
Luhlobo luni lokuphumla luya kuba luhle kumfazi wendlu? Ezona ziqhelekileyo zikhetho ezimbini - mhlawumbi hamba uhambo olude ukusuka kwiinkxalabo zemihla ngemihla, okanye ulungiselele iholide ekhaya.
Kungakhathaliseki ukuba yiyiphi inketho oyithandayo, naziphi ikhefu kufuneka zicwangciswe kakuhle. Ngokutsho kwabaphandi - iholide efanelekileyo ihlala iiveki ezimbini. Kulo xesha kwahlulwa iingxaki kunye nokungaphumeleli, kufuneka ucinge kwangaphambili yonke into kwiinkcukacha ezincinci.
Ngoko-ikhefu eligqibeleleyo kumfazi wendlu. Ukuba uthe tyekele kwizentlalo kwaye wagqiba ekubeni uhambe uhambo olude, kuyafaneleka ukuhlolisisa indlela ngokubanzi. Okokuqala, khetha indawo yokuphumla. Xa ugqibe ukuya olwandle, kufuneka ucinge ngeenkcukacha ezininzi. Okokuqala, qaleni ufumane indawo yokuhlala - urenti igumbi ehotele okanye ufumane indlu. Ukuchonga uhlahlo lwabiwo-mali, okumele ukuba luqwalasele iindleko ezingalindelekanga. Ngokukhawuleza uzakufuna ukuthenga isikhumbuzo esibi, okanye uhambe ngenye indlela.
Ukuba ukhetha ukuhamba ngeeholide ngemoto, kusekho ngakumbi. Uya kufuneka usebenze yonke indlela, qaphela amanqaku okuma, uhlele umthwalo, ngenxa yokuba unokufuna izinto ezininzi endleleni.
Ukuba imeko yezinto zivumela, ngoko uhambo oluya phesheya luya kuba yeholide enkulu. Kungaba luhambo oluya kwisixeko esilukhulile ukulivakashela - iParis, iRoma, iLondon, iAmsterdam okanye nawuphi na umzi. Kulo nqanaba, umntu othandayo. Omnye uya kukhetha ukunyuka kwiivenkile ezidumileyo, iivenkile kunye neevenkile eParis, kwaye umntu uya kuba mnandi ngakumbi ukuba angene kwiimeko zembali zaseItali.
Kodwa into ephambili yeeholide enhle yindlela ovakalelwa ngayo kunye nokholo lwakho. Ikhefu labantwana basemakhaya alibalulekanga kunabanye abantu abasebenza. Emva koko, indlu ayithatha amandla angaphantsi kwamandla.
Ukucwangcisa ikhefu ekhaya akukwazanga lula. Kodwa, umsebenzi oyintloko kukuba uphumle ngenzuzo kunye nokuzonwabisa. Kwaye kunokwenzeka. Kwaye ukuba ufanele ufune okanye wenze ikhefu ekhaya, kufuneka uthabathe le nto. Ukuphumla kwakungafani nekhulu leentsuku ngaphambi kokuba.
Okokuqala, kufuneka uhlakulele amaqhinga eholide. Zizilungiselele ukuba kuya kuba yinto ebalulekileyo ebomini bakho, kwaye akukho nto iya kukuphazamisa. Thatha icwecwe lephepha kunye neepeni, ukwahlule kwisiqingatha kunye nomgca wecingo. Ngakwesokudla kwiphepha, bhala phantsi bonke ubuthathaka beemeko eziye zaphuhliswa. Ngamanye macala aya kuhluka. Ngokomzekelo, isabelomali encinci, isidingo sokupheka isidlo sasemini imihla ngemihla, umntwana omncinci, isidingo sokuya kwiindawo zokutya, okanye, okunokwenzeka kakhulu ehlobo, imfuneko yokufumana ubusika ezahlukeneyo izityalo-imifuno, indlu yokuhlala engenakunyulwa kunye nokunye okuninzi. Ngokuqhelekileyo, umthwalo wonke wokuhlaselwa kwekhaya, owenziwe imihla ngemihla. Le yinto yonke into enokuthi ikhefu yakho ifumaneke.
Kodwa sele usuhlelwe kwiholide elingenalutho. Ngoko ke, hamba ngakwesokudla kwiphepha. Apha siza kuchaza ngokucacileyo zonke izinto ezilungileyo esifuna ukuzenza ngexesha lokuphumla, into esiyifunayo ukuyenza. Ngokomzekelo, kunoku: ukuphucula impilo kunye nomoya; Ekugqibeleni ikhululekile ixesha lokuzonwabisa; zokufunda iincwadi ezingenalo ixesha elaneleyo; ikhefu kunye nentsapho yakhe kwindalo; okanye ixesha lokuba yedwa kunye nawe, ukuthenga umzekelo ukubhalisa kwindawo yokuzivocavoca okanye kwigumbi lokubhukuda.
Ngaloo ndlela, uye wachaza imisebenzi yeholide yakho efanelekileyo. Ngoku ke qhubeka kwishedyuli ecacileyo yezenzo ezithile zentsuku nganye. Ngamanye amagama-bhala isicwangciso somsebenzi apho onke amanqaku aya kukwakhiwa ngethuba elilungileyo.
Emva koko ungaqalisa ngokukhuselekileyo iholide yakho. Kwaye nangona usenokwenza isigaba semisebenzi yasendlini - pheka isidlo sakusihlwa, hamba ukutya, yenza ukucoca kwindlu - kungekho mfuneko ukuba ungene kuyo. Ungalibali ukuba uneholide kunye nexesha elininzi omele ulichithe kwi-lonwabo nokuzonwabisa.
Khumbula ukuba apha akho amathuba angenakuphela. Kungaba uhambo okanye ipikiniki kwimvelo kunye nosapho okanye abahlobo. Ukuba imozulu ayivumeli, kusekho ithuba lokuya kwi-cinema, i-cafe okanye ukutyelela. Okanye ulungiselele ukuhlanganiswa okumnandi ekhaya, ukuqokelela zonke izihlobo kunye nabahlobo. Nika ixesha lokubelana nge-albhamu ezindala kunye neefoto, ubukele i-movie okanye ulalele umculo. Yaye ukuba ngaba isangqa sakho sineemvumi kwaye, ngokufanelekileyo, izixhobo zomculo, unokulungiselela indawo yokuhlala yangempela, eneengoma, imibongo kunye nezinye izinto ezinonwabo.
Ewe, ukuphumla ekhaya akuyona ikhefu elifanelekileyo kumfazi wendlu, kodwa konke kuxhomekeke kuwe kunye nokholo kuwe. Ukusuka endleleni oceba ngayo iholide yakho, kwaye nokuba unamathela kule cwangciso, umgangatho weeholide lakho kuxhomekeke.
Nangona kunjalo, ukuba uhlala uphupha ukuhamba kwelinye ilizwe, kodwa imeko yezemali ayivumeli ukuba kwenzeke, ungadikibala. Cinga ngendlela owazi ngayo malunga nekhaya lakho? Mhlawumbi kufuneka silungise uhambo? Wena ngokwakho uya kumangaliswa ukuba zingaphi indawo ezinomdla nezingaqhelekanga ezifumanekayo kuyo. Zininzi amabali anomdla wokufumana.
Ukongezelela, kulula kakhulu ukulungelelanisa ukhenketho olunjalo ngaphandle kokuncediswa kwesikhokelo. Ngethuba lethu kwi-Intanethi ungayifumana phantse nayiphi na ingcaciso. Ngako oko, akuyi kuba nzima ukuba usebenzise indlela. Ngoko kunomdla ngakumbi. Emva koko zibophe ngekhamera kwaye uhambe ubonakalise ukhenketho kwisixeko sakho. Liyiphi ikhefu eligqibeleleyo?
Ngokubanzi, kukho inketho eninzi yeeholide. Konke kuxhomekeke kwimeko kunye namakhono omntu. Uninzi lwabafazi basekhaya basebenzisa indlu yabo kangangokuba abafuni ukushiya konke, kwaneeholide. Abanye, ngokuchaseneyo - iphupha lokuya kumazwe akude, olwandle lokuzonwabisa. Naluphi na olu khetho lunokuba yiholide efanelekileyo, ukuba ubeka umgudu omncinci.
Yenza sakho isimo sengqondo sase spring
Iingcebiso eziwusizo kubafazi
Indlela yokufunda ukuphulaphula nokuthetha ngokuchanekileyo
Indlela yokulahla izinto ezingadingekile
Umbutho weofisi yasekhaya
Indlela yokuhlamba intambo?
Iipropati eziwusizo ze-cottage cheese, ukwakheka kwayo
Kuchaneka njani ukuphuza i-Ivan-teyi?
Iifolo zeeholide zeenwele eziphakathi
Ngaba kunokwenzeka ukwenza inhalation kubafazi abakhulelweyo?
Iklabishi inqamle inyama
Biography yeYankovsky Oleg
Izidlo zePinapple zokulahleka kokunciphisa umzimba
Iindlela zokupheka eziyimfuneko kunye neemfihlelo zokulahlekelwa ubunzima
I-jelly evela e-feijoa ebusika, iresiphi ngesithombe
Iklabishi ebhakiweyo kunye neebhali zebharley kunye namakhowe
Ezi zizodwa zokuqapha eziqakathekileyo kubakhenkethi kwiholide
I-sausages ezicobileyo kunye ne-pesto sauce ukusuka kwi-arugula